Baarlamaanka KMG ah ee Carta oo maanta kalsoonidii kala laabtay dowladda Galayr
October 28 2001 at 3:14 PM BAYDHABO PRESS
MUQDISHO 0ct 28, 2001 (BP)-Baarlamaanka KMG ah ee Carta ayaa maanta kalsoonidii kala laabtay dowladda KMG ah ee uu hogaa-minayey Cali Khaliif Galeyr. Baarlamaanka oo maalmihii ugu dambeeyey ka doodayey ajende ahaa kalsooni kala noqoshada dowladda ayaa maanta u codeeyey arrintaasi.
Kulankii baarlamaanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay 178 xildhibaan. 141 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa codkooda ku dhiibtey in ay kalsoonidoodii kala noqdeen xukuumadda, halka ay
4 xildhibaan ka aamuseen, 29 xildhibaana ay codkoodii siiyeen xukuumadda. Codbixintaasi kadib ayuu Guddomiyaha Baarlamaanka Cabdalla Deeroow Isaaq wuxuu ku dhawaaqay natiijadii isagoo sheegay inuu baarlamaanku ogolaatay in ay dhacdo xukuumaddu.
Dowladda la ridey ee Cali Khaliif Galayr ayey baarlamaanku waxyaabihii ay ku eedeeyeen waxa ka mid ahaa iyadoo wax ka qaban weydey arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada sidoo kalena ku takri fashay daqligii soogalay dowladda mudda ay jirtey isla markaana dejin weydey hanaan dhaqaale oo wax tar ah, eeday-mahaas ayaa uu dhamaantoodba iska fogeeyay Mr. Galayr oo dhankiisa ku eedeeyay Cabdiqaasim iyo kooxdiisu inay dusha ka saarayaan eedayn uusan isagu galin, isagoo horay u sheegay in uusan ahayn kaligiis cidda tagaysa ee haddii isaga la rido ay ragga ay ishayaanan ayan ka dambaynayn.
Ilaa hadda lama Oga waxa uu Galayr kaga Jawaabi doona ariditaankaan maanta xukuumadiisa la riday, taasi oo uu horay ugu eedeeyay inay tahay mid ay ka dambeeyaan Cabdiqaasim salaad xassan iyo ragiisu, Cali Khaliif waxa uu imanka safar ugu maqan yahay wadanka Maraykanka.